नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ले निमार्ण र उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएको ३ सय मेघावाटको उत्तरगंगा आयोजना खोसेर हिजै मात्र खुलेको कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा! – ZoomNP
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ले निमार्ण र उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएको ३ सय मेघावाटको उत्तरगंगा आयोजना खोसेर हिजै मात्र खुलेको कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा! प्रकाशित मिति: मङ्गलवार, मंसिर ०७, २०७३ समय - १५:५६:४० ७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण र उत्पादन गर्ने टुंगो लागिसकेको ३ सय मेघावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना सोमबार मात्रै खुलेको जलविद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्ने देखिएको छ । नयाँ कम्पनीले उत्तरगंगासँगै नौमुरे, नलसिंह गाड र बूढीगण्डकीको पनि निर्माण जनाइएको छ । यसअघि, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा प्राधिकरणअन्तर्गत सब्सिडायरी कम्पनीहरुको कार्ययोजना अघि सार्दै उत्तरगंगालगायत ७ वटा आयोजनाहरु प्राधिकरणबाटै बनाउने टुंगो गरिएको थियो ।